Lockey ga-ekere òkè na ngosi ngosi CIOSH emere na Shanghai, China, na 14-16th, Apr., 2021. Nọmba ọnụ ụlọ 5D45. Nabata ileta anyị na Shanghai. Banyere onye nhazi: CHINA TEXTILE COMMERCE ASSOCIATION China Textile Commerce Association (CHINA TEXTILE COMMERCE ASSOCIATION) bụ mba na-enweghị uru ...
China Lunar New Year Holiday Rịba
Ezigbo omenala niile, Pls rịba ama na Lockey ga-eme Ememme Afọ Ọhụrụ China na 1st-21st, Feb., n'oge a ga-emechi ọfịs na ahịhịa niile. Nrụpụta na nnyefe ga-akwụsị n'oge ezumike anyị, mana ọrụ anaghị akwụsị. Anyị ga-amaliteghachi ọrụ na 22nd, Feb., 2021.
2019 NSC Congress & Ngosipụta
2019 NSC Congress & Expo September 9-11, 2019 Nnukwu oghere! Bọchị ngosi: September 9-11, 2019 Ebe: San Diego Convention Center Cycle: otu ugboro n'afọ abụọ: 5751-E nke ndị nchekwa nchekwa mba na-akwado ya, ihe ngosi mkpuchi mkpuchi ọrụ anyị bụ otu n'ime ihe ngosi dị mkpa na ọkachamara ...
2019 The 126th Guangzhou ngosi
The 126th mgbụsị akwụkwọ ngosi ga-ẹkenịmde ke guangzhou na 2019 ngosi Octoberbọchị October 15 - 19, 2019 ngosi othlọ Ntu 14.4B39 ngosi City Guangzhou ngosi okwu China Import na Export Commodities Fair pazhou pavilion Pavilion Aha China Import na Export Commodities Fair Site O ...
Ihe ngosi 2019 A + A
Lockey ga-esonye na ngosipụta A +, anyị nwere olile anya na ị nwere ike ịbịa zute na Lockey, ka anyị wulite ntụkwasị obi na ọbụbụenyi miri emi, Lockey CARES for any friend A + A 2019, nke a maara dị ka ihe ngosi nchekwa mba na ahụike na Dusseldorf, Germany 2019, ga-eme site na Nọvemba ...